Iindaba -SUNTOP Ukuchaneka okuphezulu kwesayizi encinci yokusika umatshini wokusika i-laser eJamani
Ukuchaneka okuphezulu kwe-CNC yefayibha laser umatshini wokusika wahanjiswa ngempumelelo eJamani. Umthengi ubukhulu becala ubonelele ngeenkonzo zesinyithi kwaye ufuna ukuchaneka kwe-0.08mm. Ekuqaleni, wakhetha abathengisi abaninzi, emva kokuthelekisa ubumbeko lomatshini, ukuchaneka, ubungcali kunye nenkonzo yomatshini, i-SUNTOP LASER ekugqibeleni ikhethiwe. Apha, sinqwenela ukuba ishishini lakhe libe ngcono kwaye lingcono. I-SUNTOP iya kuqhubeka nokusebenza nzima kwaye ayizukuyeka.
Ngokwedatha yamva nje ekhutshwe nguLawulo Jikelele lwamasiko, ukungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kurhwebo lwaseTshayina kufikelele kwi-2.84 yezigidigidi ze-yuan ngo-Okthobha, ukonyuka kwe-4.6% kwangelo xesha linye kulo nyaka uphelileyo (efanayo apha ngezantsi). Oku ikwayihlumo elihle lokungeniswa kurhwebo lwangaphandle kunye nexabiso lokuthumela kwelinye ilizwe kwiinyanga ezintlanu zilandelelana ukusukela ngoJuni. Phakathi kwabo, ukuthunyelwa kwelinye ilizwe bekuyi-1.62 yezigidigidi ze-yuan, ukonyuka kwe-7.6%; Ukungeniswa elizweni bekuyi-1.22 yezigidi zezigidi ze-yuan, ukonyuka kwe-0.9%; Intsalela yorhwebo yayiyi-401.75 yezigidigidi ze-yuan, ukonyuka kwama-34.9%. Uhlalutyo lubonisa ukuba izinto ezintle ekhaya nakumazwe aphesheya zisaqokelela, kwaye urhwebo lwangaphandle kulindeleke ukuba ligcine ukukhula okuzinzileyo kunyaka wonke.
Ngokubanzi, kwiinyanga ezili-10 zokuqala zalo nyaka, ixabiso elipheleleyo laseTshayina lokungenisa ngaphakathi kunye nokuthunyelwa kwempahla yayiyi-25.95 yezigidigidi ze-yuan, ukonyuka kwe-1.1%. Phakathi kwabo, ukuthunyelwa kwelinye ilizwe bekuyi-14.33 yezigidigidi ze-yuan, ukwanda kwe-2.4%; Ukungenisa ngaphakathi kwakuyi-11.62 yezigidi zezigidi ze-yuan, phantsi kwe-0.5%; Intsalela yorhwebo yayiyi-2.71 trillion yuan, ukwanda nge-16.9%.
Ngelixa kugcinwa ukukhula okuzinzileyo kwizinga, ubume bezorhwebo base China buqhubekeke ngakumbi, ngorhwebo jikelele lokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kunye nenani liyanda. Kwiinyanga ezili-10 zokuqala, ukungenisa kurhwebo lwaseTshayina kunye nokuthumela kwelinye ilizwe kufikelele kwi-15.6 yezigidi zeerandi, ukonyuka kwe-2.8%, kubalwa i-60.1% yexabiso lokurhweba langaphandle e-China, ukonyuka kwepesenti ye-1 kwelo xesha linye kunyaka ophelileyo. Phakathi kwabo, ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kufikelele kwi-8.51 yezigidigidi ze-yuan, ukonyuka kwe-4.8%; Ukungenisa ngaphakathi kufikelele kwi-7.09 yezigidi zezigidi ze-yuan, ukonyuka kwe-0.5%. Kwangelo xesha linye, ukungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kurhwebo lokuqhubekeka kwafikelela kwi-6.09 yezigidi zeerandi, yehla nge-6.2%.
Uhlalutyo lubonisa ukuba ukubuyela ngokukhawuleza kwezinto ezithunyelwa kumazwe angaphandle kunika amandla okuphucula ubume bezorhwebo ngokubanzi. U-Wang Han, uqoqosho oluphambili lwe-Societe Generale Securities, uthe ukusukela ngo-Matshi, kwinkqubo yokubuyiselwa kwe China kumazwe angaphandle, amandla okubuyisela ikakhulu avela kuthengiso jikelele lwezorhwebo. Izinga lokukhula lonyaka nonyaka kurhwebo jikelele lokuthumela ngaphandle lubuyisile laya kwi-16.8% ukusuka kwinqanaba eliphantsi le-4.5% ngo-Matshi ukuya ku-Okthobha; ukusukela ngeyoMqungu ukuya kweyeDwarha, ukukhula okuthe kratya kwezorhwebo ngokubanzi kubuyiselwe kwi-2.8%, kubalwa malunga ne-60% yokuthumela ngaphandle e-China, ukonyuka malunga ne-1% xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo. Kwangelo xesha linye, urhwebo olwenziweyo lokungenisa ngaphakathi lwaluyi- 7.5% ngonyaka, kwaye urhwebo olungenayo lwalu-14.7% ngonyaka-ngonyaka. Kwinkqubo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kumazwe angaphandle emva kwalo bhubhane, urhwebo ngokubanzi olunexabiso elongeziweyo luya kuphinda lubuye ngcono kwaye ubume bezorhwebo base China buya kuphuculwa.
Umbhobho weFibre Laser umsiki, Tube Laser umsiki, Ifayibha Laser Tube Ukusika Umatshini, Umatshini wokusika we-Fiber Laser, Ifayibha I-Laser Ukusika Umatshini, Ifayibha I-Laser Ukusika Umatshini,